Iiglasi ze-AR ze-Apple ziya kunxiba iiLensi zePancake Ngokutsho komhlalutyi uKuo | Ndisuka kuMac
Iiglasi ze-AR ze-Apple ziya kuthwala iilensi zePancake ngokutsho komhlalutyi uKuo
Sibuyela kunye namahemuhemu malunga neeglasi ze-AR ezintsha ukuba i-Apple izimisele ukuyiqalisa ekupheleni konyaka ozayo kwaye ikhukulise imarike kunye nabo ekuqaleni kwe-2023. Ubuncinane yiloo nto umhlalutyi uKuo akutshoyo kwaye sele sisazi ukuba kwiingqikelelo zakhe ngokuqhelekileyo ufumana. ilungile. Kuyinyani ukuba ngamanye amaxesha ibibhideka kodwa hayi kakhulu, ke ngalo lonke ixesha uxela kwangaphambili kulungile ukuba uyithathele ingqalelo. Ngeso sihlandlo uyasinika ulwazi olutsha malunga nendlela ezi glasi ze-AR ezivela kwinkampani yaseMelika ziya kwenziwa ngayo.
Iiglasi ze-AR ekudala zilindiwe zika-Apple zibonakala ngathi ziyakhula. Ubuncinci ephepheni, kuba asibonanga nayiphi na iprototype kwaye nangaphantsi sinesiqinisekiso esivela kwinkampani yaseMelika ukuba iyasebenza ngokwenene kule projekthi. Okwangoku yonke into isekelwe kwiithiyori kunye namahemuhemu aqaliswe, uninzi, ngokuqinisekileyo, ngumhlalutyi uKuo. Enyanisweni sinokuthi ngoku uphoswe echibini esithi iilensi zeglasi ezintsha ziya kuba. Uhlobo lwePancake.
Kwinqaku lophando kunye ne-TF International Securities, uKuo uthe ii-headsets ze-Apple ziya kuba neelensi ezimbini "zePancake 3P," ezinoyilo olusongekileyo oluvumela ukukhanya ukuba kubonakale umva naphambili. phakathi kwesikrini kunye neelensi. Olu luyilo lunokuvumela i-Apple ukuba ikhuphe iiglasi ezicwebezelayo nezikhaphukhaphu ze-AR.
Ewe kunjalo, ngumcimbi wokulinda ukuba sisondele kumhla wokuphehlelelwa kweeglasi, eziya kuba ngokutsho komhlalutyi ekupheleni konyaka ka-2022 kwaye ngeso sihlandlo ngokuqinisekileyo siya kuba nolwazi oluthe kratya kunye nolukhuselekileyo malunga nendlela abayenza ngayo. iya kuba, ixabiso kunye nezinye iimpawu esizikhathaleleyo. Kodwa okwangoku nanjengoko sisazi, kufuneka siyikhumbule loo nto Ziya kubiza kakhulu kodwa zenziwe ngezinto ezibonakalayo kunye nokusebenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » Iiglasi ze-AR ze-Apple ziya kuthwala iilensi zePancake ngokutsho komhlalutyi uKuo
Iminyaka eyi-15 kunye nangaphezulu kwe-270 yezigidi zeedola enkosi ngokunxulumana ne (RED)
NgoJanuwari 27, iziphumo zoqoqosho kwikota yokugqibela ka-2021 ziya kubhengezwa